Uyikhetha njani ithebhulethi | Iindaba zeGajethi
Kwiminyaka yakutshanje, iipilisi ziye zaba sisixhobo esithandwayo kumakhaya amaninzi xa kufikwa kumba wokunxibelelana ne-Intanethi, ukufikelela kwinethiwekhi, ukwenza uphando kwi-Intanethi, ukuthumela ii-imeyile ... esinazo iimodeli ezahlukeneyo, iinkqubo ezahlukeneyo zokusebenza, ubungakanani obahlukeneyo, amaxabiso ahlukeneyo ...
Ukuba uyakholelwa yayiposiwe-pc kwaye lixesha lokuba uthenge ithebhulethi yokwenza imisebenzi yemihla ngemihla naphina ngaphandle kokuxhomekeka kwikhompyuter, nasi isikhokelo indlela yokukhetha ithebhulethi. Kweli nqaku siza kuqwalasela izinto eziluncedo nezingeloncedo zenkqubo nganye yokusebenza kunye neemodeli ezikhoyo kwintengiso.
1 Usayizi weskrini
3 Ukuhambelana kwesicelo / i-ecosystem
5.1 Iipilisi ze-Android
5.3 Umphezulu weMicrosoft
Okwangoku kwimarike esinazo ubukhulu beescreen ezahlukeneyo ezihambayo ukusuka kwi-8 intshi ukuya kwi-13. Ubungakanani besikrini sesinye sezona zigqibo ziphambili ekufuneka sizithathele ingqalelo, kuba ukuba sifuna ubhetyebhetye kwaye sihambisa naphina, okuncinci kuya kuba ngcono.
Ukuba sifuna ukuyihambisa kodwa sifuna ukufumana okuninzi kuyo, imodeli ye-intshi ye-13 inokuba yeyona ndlela ilungileyo, ngakumbi ukuba injongo yethu kukufikelela buyisela ikhompyuter yethu okanye ilaptop ngaphandle kokubingelela ubungakanani bescreen.
Inkqubo yokusebenza yenye inkalo ekufuneka siyithathele ingqalelo. Nangona kuyinyani ukuba i-Android yeyona nkqubo isetyenziswa kakhulu kwihlabathi, ukuba sithetha ngamacwecwe, into iyasilela kwaye ininzi kakhulu, kuba uninzi lwezicelo ujongano lwazo aluqhelwanga ukuba lusetyenziswe kwithebhulethis, into eyenzekayo kwinkqubo ye-Apple ye-ecosystem.
Ukongeza, i-iOS isinika inani elikhulu lezicelo zazo zonke iintlobo, izicelo ezilungiselelwe ikhusi enkulu esivumela ukuba sisebenzise eli thuba kwiifowuni eziphathwayo. I-Apple yenza ukuba kufumaneke kubasebenzisi be-iPad imisebenzi ethile enjengokwahlulahlula isikrini okanye ukwenza imisebenzi emininzi, ezinye izinto ezisisiseko ekufanele ukuba nazo naziphi na iipilisi.
Okwesithathu, kwaye nangona uninzi lungayithathi njengecwecwe, kufuneka siyibeke Umphezulu weMicrosoft. Olona loncedo luphambili olunikezelwa luhlu lweMicrosoft Surface lufumaneka kuloo nto ilawulwa yiWindows 10 kuhlobo olupheleleyo, ke sinako ukufaka nasiphi na isicelo esifumanekayo kwiidesika nakwiilaptops ngaphandle komda.
Windows 10 idibanisa uguqulelo lweepilisi ezilungele umphezulu, esivumela ukuba sinxibelelane nayo ngokungathi yithebhulethi ye-Android okanye i-iPad kodwa ngamandla kunye nokuguquguquka esikunikwa yiPC.
Ukuhambelana kwesicelo / i-ecosystem
Njengoko benditshilo kwinqaku elidlulileyo, i-Android ayisiyo ecosystem ukuba sikhangela ithebhulethi ukubuyisela i-PC yethu kuba inani lezicelo ezihambelanayo lilinganiselwe. Kwiminyaka yakutshanje, isigebenga sokukhangela kubonakala ngathi sizigcinile ezi zixhobo ukugxila kwii-smartphones, impazamo eya kuthi ibize kakhulu ekuhambeni kwexesha.
I-Apple yenza phantse Isigidi esinye seapps ezihambelana ne-iPad, izicelo ezisebenzisa ithuba lobude kunye nobubanzi bescreen kwaye kwimeko ezininzi, zizicelo ezifanayo esinokuzifaka kwi-iPhone, ke akufuneki senze inkcitho ephindiweyo.
IMicrosoft eneSurface lolona khetho lufanelekileyo ukuba asikwazi ukuhlala ngaphandle kweapps ezithile zedesktop apho sisetyenziselwe khona kwaye ngaphandle kwayo asinakho ukusebenza ngokufanelekileyo.
Amacwecwe alawulwa yi-Android, abeka kuthi izixhobo ezifanayo esinokuzifumana kwii-smartphones ezilawulwa yinkqubo efanayo yokusebenza, esivumela ukuba siqhagamshele ihabhu kwizibuko le-USB-C ukudibanisa imemori khadi, intonga ye-USB, i-hard drive okanye Nokuba liliso ukuba lixhasa lo msebenzi.
Ngokumiliselwa kwe-IP Pro, abafana baseCupertino bandise inani lezinto esinokuthi sizidibanise ngaphandle kokuhlala sihamba ngebhokisi. Inkqubo ye- iPad Pro 2018 ithathe indawo yonxibelelwano ngombane ngokwesiko ngezibuko le-USB-C, izibuko apho Sinokudibanisa umfundi wekhadi, iliso, idiski enzima okanye ihabhu yokudibanisa izixhobo ezahlukeneyo kunye.
Umphezulu weMicrosoft mhle ngokufana nelaptop ngaphandle kwekhibhodi, ke isinika unxibelelwano olufanayo njengelaptop, ekubeni sisixhobo esisinika eyona nto isebenzayo xa uqhagamshela nayiphi na into eyandisiweyo yokwandisa imisebenzi esisinika yona.
Zonke iimodeli zethebhulethi ephezulu zisivumela ukuba sidibanise zombini ikhibhodi kunye nosiba lokuzoba kwiscreen. Ukongeza, iimodeli ezilawulwa yiWindows, ezinjenge-Samsung Galaxy Tab kunye neMicrosoft Surface nayo masidibanise imouse, ukwenzela ukuba unxibelelwano nenkqubo yokusebenza kube lula ngakumbi.
Kwiminyaka yakutshanje, ixabiso lee-smartphones lenyuke kakhulu, ngamanye amaxesha lidlula i-euro ezingama-1.000 XNUMX. Njengokuba iminyaka igqithile, amacwecwe nawo enyukile kwixabiso ngenxa yokwanda okubonakalayo kwezibonelelo abasinika zona.
Ithebhulethi ye-Android ecosystem, njengoko benditshilo ngasentla ilinganiselwe kakhulu Ngenxa yokuba uninzi lwabavelisi luyekile ukubheja kule marike, ishiya uninzi lwayo ku-Apple, ethi yona ibe ngumnini wayo.
Iimodeli okwangoku ezibonelela ngexabiso elifanelekileyo lemali kwintengiso zinikezelwa luluhlu lwe-Samsung galaxy tab, ukusuka kwi-Samsung eyenza ukuba ifumaneke kuthi iimodeli ezahlukeneyo ezivela kwi-euro ezingama-180, Ixabiso esinokuba nalo xa sinayo ithebhulethi esisiseko yokwenza izinto ezine esihlala sizenza neqela lethu, njengokujonga iinethiwekhi zentlalo, ukutyelela iwebhusayithi, ukuthumela ii-imeyile ...
I-Apple ibonelela ngoluhlu lwe-9,7-intshi ye-iPad, i-Mini Mini, i-10,5-intshi ye-iPad kunye ne-11 kunye ne-12,9-intshi ye-iPad Pro. Ipensile yeApple iyahambelana kuphela noluhlu lwePad Pro, Ke ukuba umbono wethu kukuwusebenzisa, kufuneka siwuqwalasele xa uthenga i-Apple iPad. Ixabiso lesiseko yazo zonke iimodeli ze-iPad ngolu hlobo lulandelayo:
I-iPad Mini 4: 429 i-euro yemodeli eyi-128 GB ngonxibelelwano lwe-Wi-Fi.
I-iPad 9,7 intshi: i-349 i-euro yemodeli engama-32 GB ngonxibelelwano lwe-Wi-Fi.
I-10,5-intshi ye-iPad Pro: ii-euro ezingama-729 kwimodeli engama-64 GB ngonxibelelwano lweWi-Fi.
I-11-intshi ye-iPad Pro: ii-euro ezingama-879 kwimodeli engama-64 GB ngonxibelelwano lweWi-Fi.
I-12,9-intshi ye-iPad Pro: ii-euro ezingama-1.079 kwimodeli engama-64 GB ngonxibelelwano lweWi-Fi.
Umphezulu weMicrosoft usinika ezinye Ukucaciswa esinokukufumana kwiilaptops eziphezulu kwintengiso, kodwa ngokungafaniyo okunikezelwa yikhompyuter ngaphandle kwekhibhodi, ikhibhodi ekufuneka siyithengile ngokwahlukeneyo ukuba siyayifuna, njengoko kunjalo ngazo zonke iimodeli ze-iPad.
Ukucaciswa okuphambili komphezulu:
InkquboI-Intel Core m3, isizukulwana sesi-5 seCore i7 / i7.
Memoria4/8/16 GB RAM
Amandla okugcinaI-128GB / 256GB / 512GB / 1TB
Imodeli yexabiso eliphantsi, ngaphandle kwebhodibhodi, iqala nge-899 euros, (Intel Core m3, 4 GB RAM kunye ne-128 GB SSD) ixabiso elinokubonakala liphezulu kwithebhulethi, kodwa oko ukuba sithathela ingqalelo ukungahambelani okusinika kona, Zombini izicelo kunye nokuhamba, kungaphezulu kwexabiso elifanelekileyo kwithebhulethi yala mandla.
Ukuba umphezulu weMicrosoft ungaphandle kuhlahlo-lwabiwo mali, kodwa ufuna ukuqhubeka nokugcina umbono wokuba uyasinika, sinokukhetha Surface Yiya, ithebhulethi enentsebenzo esezantsi ngexabiso eliphantsi, nangona isenokungaphumeleli kwabanye abasebenzisi abafuna ngakumbi. I-Surface Go iqala nge-449 euro kunye ne-64 GB yokugcina, i-4 GB ye-RAM kunye neprosesa ye-Intel 4415Y.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » amacwecwe » Uyikhetha njani ithebhulethi